तपाईं एक bookmaker को साइटमा एक नयाँ खाता सिर्जना गर्न धेरै चरणमा दर्ता प्रक्रिया थकित छन्?
1xBet, पेरिस प्रस्ताव विश्वसनीय, समाधान: एजेन्सी वेबसाइटमा दर्ता धेरै सरल छ, किनभने यो तुरुन्तै छैन आवश्यक:
को निवास जानकारी प्रविष्ट;
एउटै फोन नम्बर र इमेल ठेगाना संकेत!
प्लेयर को निर्देशांक खाता सिर्जना गरेपछि व्यक्तिगत खातामा आफ्नो विवेकमा संकेत गर्दै.
को स्पष्ट लाभ बाहेक, 1xBet को bookmaker राम्रो र भर्चुअल खेल र लोकप्रिय श्रृंखला मा अनलाइन क्यासिनो पेरिस खेल पेरिस को एक विस्तृत श्रृंखला प्रतिनिधित्व, बोनस र अष्ट्रेलिया संग स्लट मिसिन र लटरी.
Marque गर्न Chupo-Moting3PSG लागि दुई खेल मा लक्ष्य
रूपमा André: "Barca मेरो घर हो, तर कुनै समय फर्केर जान "
1xBet प्रविष्ट तरिकाहरू
यो कम्पनी4साइट 1xBet मा दर्ता गर्न विकल्प:
1) 1xBet रेकर्ड 1 क्लिक
को तेज बाटो एकल क्लिकमा दर्ता छ. आफ्नो देश र मुद्रा संकेत पछि, तपाईं सबै डाटा प्रविष्टिहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ.
बोनस प्राप्त गर्न SPORTPARI प्रयोग प्रोमो 100% आफ्नो पहिलो जम्मा अप 50 000 CFA.
2) उल्टो फोन
1xBet खाता जडान गर्न, तपाईं सम्बन्धित मोबाइल नम्बर खाता प्रविष्ट गर्नुपर्छ, पासवर्ड र प्रेस "जडान" बटन. यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं डाटा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ.
3) इमेल द्वारा
तपाईं आफ्नो इमेल खाता पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ. खाता संग इमेल सम्बन्धित यसलाई अनिवार्य छ. यो दर्ता फारम सबैभन्दा व्यापक छ. यहाँ, तपाईं पूरा गर्नुपर्छ:
सञ्चालनका लागि पैसा
कुपन कोड (खेल परी)
तपाईं मात्र सही डाटा प्रविष्ट गर्नुपर्छ भनेर टिप्पणी, अन्यथा खाता पहिचान प्रक्रिया कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन.
मोबाइल फोन को संख्या निर्दिष्ट पछि, तपाईं बटनमा क्लिक गर्नुहोस् पर्छ "सुरक्षित गर्नुहोस्". एसएमएस सट्टेबाजी निर्दिष्ट संख्या रोशनी. सन्देश संवाददाता सञ्झ्यालमा लिङ्क पुष्टि गर्न दर्ता फारममा प्रविष्ट हुनुपर्छ.
अर्को चरण प्रयोगकर्ता संग सम्झौता सर्तहरू को स्वीकृति पुष्टि र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न छ.
4) सामाजिक सञ्जाल र तत्काल सन्देश लागि
द्रुत जडान लागि आफ्नो 1xBet सामाजिक सञ्जाल लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं डाटा प्रविष्ट गर्नुपर्छ: Google+, Mail.ru, तार, आदि. एक पटक जडान, तपाईँ लिङ्क नेटवर्क को आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ. दर्ता, इच्छित नेटवर्क निर्दिष्ट, प्रचार कोड SPORTPARI र मुद्रा.
यो सिस्टम को आवेदन संख्या वा अक्षरहरू प्रविष्ट गर्न भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ (कोड 1xbet को छवि) पुष्टि गर्न तपाईं मानव हो.
को 1xBet bookmaker करकाउ मा लाइसेन्स काम गर्दछ र विश्वव्यापी खेलाडीहरू स्वीकार किनभने अवस्थित छैन साइट पहिचान.
त्यसैले, को 1xBet पहिचान कसरी खर्च गर्न को प्रश्न आफैमा गायब, तर त्यस्तो प्रक्रिया साइटमा देखिने छैन के मतलब छैन.
दर्ता पछि, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत खातामा सबै खाली भर्नुपर्छ.
को bookmaker तपाईं पैसा झिक्न आफ्नो पहिचान को फोटो पठाउन अनुरोध सक्छ. तपाईंले यसलाई नडराऊ गर्नुपर्छ, यो खाता प्रक्रियामा आफ्नो धन को एक पूर्ण सामान्य तरिका हो किनभने.
सुरक्षा सेवा तपाईं एउटा पासपोर्ट फोटो पृष्ठ र अन्य व्यक्तिगत जानकारी पठाउन अनुरोध गर्न योग्य छ.
डाटा गोपनीयता चिन्ता छैन, सबै करकाउ को सीट नियन्त्रित छ. चेक एक हप्ता लिन्छ, तर त्यहाँ सधैं असाधारण अवस्थामा छन्.
टिप्पणी भनेर restocking गर्दा प्रयोग भुक्तानी विधि मार्फत पैसा झिक्न सक्दैन.
जम्मा र बोनस 1xBet
को bookmaker 1xBet मा, जडान नयाँ खेलाडी गर्न सिस्टम द्वारा नियुक्त पहिचान नम्बर खाता सिर्जना पछि छ. तपाईं दर्ता ई-मेल ठेगाना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. पहिलो र दोस्रो मामला मा, तपाईं एक पासवर्ड. यो ब्राउजर सेटिङ आफ्नो पासवर्ड र प्रयोगकर्ता नाम सुरक्षित गर्न कुनै एक प्रयोग गर्न र आफ्नो खाता पहुँच गर्न सक्छन् भनेर सबै भन्दा राम्रो छ.
नयाँ खाता साइट मा सफलतापूर्वक लग एक पटक, तपाईं आफ्नो खेल खाता पुन: लोड गर्नुपर्छ. पहिलो जम्मा मा, प्लेयर स्वतः बोनस हुन्छ 100% प्रोक्सी रकम. सट्टेबाजी लागि आलिन्द शर्त छ. को मा वृद्धि राशि को खाताहरू कम्तीमा तीन पटक, तपाईं जम्मा पैसा झिक्न सक्छ.
शुक्रवार, प्रचार "भाग्यशाली शुक्रवार" मान्य छ: नयाँ खेलाडी खाता 100 यूरो रिसेट छ. र reconstitution बुधवार अर्को बोनस ल्याउन र रकम दोब्बर हुनेछ!
थप, दर्ता खेलाडीहरू मुक्त खेल र पेरिस प्राप्त गर्न धेरै प्रचार प्रस्तावहरू र कुपन कोड प्रयोग गर्न अवसर, र क्षमता वीआईपी Cashback कार्यक्रममा खर्च भएको रकम केही रिकभर गर्न.
हामी यस लेखमा उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा र हामी 1xBet मा रेकर्ड गर्न कसरी बुझ्न.